Kick the Buddy: Forever 1.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Kick the Buddy: Forever
Kick the Buddy: Forever ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အသစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကဒီမှာပါ! မိမိအသစ်ကိုအေးမြဂိမ်းထဲမှာ Buddy တယောက်နှင့်အတူ Play အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လက်နက်များစမ်း! စမ်းသပ်မှု, ထာဝစဉ်အဆိုပါလုပ်ပြီး Buddy ထမှုတ်အနုမြူဗုံးလက်နက်, စားဆင်ယင်လုပ်ပြီး Buddy တက်ကိုသုံးပါနှင့်, အသစ်စက်စက် Kick အတွက်ဤမျှလောက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်!
အဆင့်မြှင့်အံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်, Buddy တယောက်နှင့်အတူသစ်ကို interaction က, Hilary လက်နက်များ, စိတ်ကူးနောက်ခံနှင့်ထူးခြားသော features တွေအများကြီးခံစားပါ။
Kick the Buddy: Forever အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Kick the Buddy: Forever အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Kick the Buddy: Forever အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Kick the Buddy: Forever အား အခ်က္ျပပါ
mat7bk19 စတိုး 10 24.69k
Kick the Buddy: Forever ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Kick the Buddy: Forever အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.playgendary.com/privacy-policy/
App Name: Kick the Buddy: Forever
Release date: 2019-07-08 17:27:17
လက်မှတ် SHA1: 1C:DF:CA:90:F3:1D:84:85:1E:81:6B:23:3C:66:AB:63:25:FB:5B:AB
Kick the Buddy: Forever APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ